अमेरिकी डलर अस्ट्रेलियन र क्यानेडियनभन्दा अगाडि | Business and Economy of Nepal
अमेरिकी डलर अस्ट्रेलियन र क्यानेडियनभन्दा अगाडि
Posted on September 26, 2011 by Babukrishna
गत एक हप्तामा अमेरिकी डलर महंगिएर अष्ट्रेलियन डलर, क्यानेडियन डलर भन्दा माथि पुगेको छ । अमेरिकी अर्थतन्त्रमा शिथिलता छाएपछि अमेरिकी डलर कमजोर भएर गत श्रावण महिनाको मध्यतिर १ अमेरिकी डलर बराबर नेपाली रुपियाँ ७० सम्म पुगेको थियो ।
३ हप्ताको अवधिमा अमेरिकी डलर नेपाली रुपियाँसग ५ रुपियाा ८५ पैसाले महंगो भएको छ । आइतबार १ अमेरिकी डलर बराबर ७९ रुपियाँ ४० पैसामा कारोबार भयो । गत भाद्र १९ गते १ अमेरिकी डलर बराबर ७३ रुपियाँ ५५ पैसामा कारोबार भएकोमा आइतबार असोज ८ गतेसम्म पुग्दा ५ रुपियाँ ८५ पैसाले वृद्धि भएको हो ।
अमेरिकी अर्थतन्त्र कमजोर रहँदा अमेरिकी डलरको अवमूल्यन हुँदै आएको थियो । गत आर्थिक वर्ष २०६६।६७ मा १ अमेरिकी डलरको औसत नेपाली रुपियाँ ७२ रुपियाँ ३१ पैसा रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १ अमेरिकी डलर बराबर औसत ७४ रुपियाँ २३ पैसा थियो ।
विशेषत अमेरिकी डलर र सुनको मूल्य एक आपसमा विपरित हुने गरेको भए पनि यस वर्ष यो मान्यतामा मूल्य अडिग रहन सकेन । विश्वका मुख्य मुख्य अर्थतन्त्र भएका देशहरुको शेयर बजारमा गिरावट आएकाले अमेरिकी डलर महंगिएको एक अर्थविद्हरुले बताए । ग्रिसलगायत समग्र युरोपेली महादेशको अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीका कारण अमेरिकी डलर महंगिंदै गएको हो ।
यता संयुक्त राज्य अमेरिकाको बाराक ओबामा सरकारले दुई वर्षसम्म व्याजदरलाई स्थिति राख्ने घोषणा गरेका कारण पनि अमेरिकी डलर केही सुदृढ भएको अर्थविद् डा. चिरञ्जीवी नेपालले बताउनुभयो ।
अर्थशास्त्रीहरुले अर्को विश्व आर्थिक मन्दी आउने खतरा देखेर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले समेत विश्वका ठूला अर्थतन्त्रलाई चनाखो रहन सुचित गरेको छ । यसै सन्दर्शमा विश्वका ठुला औद्योगिक राष्ट्रहरुको समूह ‘जी–८’को समेत बैठक बस्ने भएको छ । उक्त बैठकलाई निकट भविष्यमा आउने अपेक्षा गरिएको विश्व मन्दीलाई न्यूनिकरण गर्न के कस्तो उपाय अपनाउन सकिन्छ भन्ने छलफल हुने जनाइएको छ ।
अमेरिकी डलर बलियो हुँदा नेपाललाई फाइदा बेफाइदा दुवै रहेको अर्थशास्त्री नेपालको भनाइ रहेको छ । उहाँका अनुसार नेपालले तिर्नुपर्ने ऋणको व्याज डलरमा तिर्नुपर्ने हुँदा यस्तो डलर अहिलेको मूल्यमा तिर्नुपर्ने भएमा नेपाललाई बेफाइदा हुनेछ । ‘नेपालमा सामानहरुको खासै उत्पादन नहुने र प्राय सामान चीन, हङकङलगायतका तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिने हुँदा ती सामानहरुको मूल्य बढ्ने हुन्छ ।’–अर्थशास्त्री डा. नेपालले भन्नुभयो –‘नेपालले आयातमा तिनुपर्ने रकम पहिले भन्दा बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ र नेपालको क्रय क्षमतामा ¥हास आउँछ ।’
अर्थमन्त्री नेपालले नेपालको निर्यात अवस्थामा राम्रो भएको अवस्थामा भने डलरको विनिमय दर महंगो हुनु फाइदाजनक नै रहन्छ तर नेपालको हकमा निर्यातको अंश एकदम कम रहेको छ । डलर महंगो हुँदा नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स भने बढ्ने निश्चित । डलर महंगो हुने आशामा विदेशी बैंकमै रकम जम्मा पारेर राखेका वैदेशिक रोजगारमा गएका दाजुभाईले यही मौका छोपेर नेपालमा रकम पठाउने हुँदा रेमिट्यान्सको वृद्धि दरमा समेत प्रभाव पर्ने अर्थमन्त्री नेपालको ठहर रहेको छ ।
Filed under: General | Tagged: american dollar appreciation |
« गैर भन्सार अवरोधका कारण अन्तर क्षेत्रीय व्यापारमा कमी पौने तीन अर्ब अपचलन गर्ने बैंकर पक्राउ »